မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | အော်ဂဲနစ်လျှော်
THC ဖြစ်သော်လည်းဆေးခြောက်အပင်များတွင်တွေ့ရသောအခြားဆေးခြောက်အပင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော်လည်း CBD သည်ထိုကဲ့သို့သောသက်ရောက်မှုမျိုးမရှိပါ။ အစားနည်းသောဆေးများတွင်အသုံးပြုသော CBD သည်သတိပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်၊ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်၊ စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိတ်ကိုလျှော့စေသည်။ ၎င်းသည်အကျိတ်ဆန့်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောကာကွယ်သည့်အပြင်၊ antioxidant နှင့်ခိုင်ခံ့သော anti-inflammatory agent ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။
CBD သည်ဆေးခြောက်စက်ရုံတွင်တွေ့ရသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပင်များတွင်ဒြပ်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ လူသိအများဆုံး THC ဖြစ်သော်လည်းအပင်တွင် CBD များစွာပါဝင်သည်။
CBD Oil ဆိုတာဘာလဲ။
CBD ဆီသည်ဆေးခြောက်အပင်မှ CBD ထုတ်ယူမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ဥပမာအားဖြင့်လျှော်မျိုးစေ့ဆီသို့မဟုတ်အရက်ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ရောစပ်သည်။ CBD ဆီကိုလျှာအောက်မှာထည့်ပြီးအဲဒီမှာသိမ်းထားတယ်။ ဤနည်းဖြင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးစီးဆင်းမှုကိုလျင်မြန်စွာစုပ်ယူပြီးစားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်များထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမြန်စေသည်။
ဆေးခြောက်အပင်များတွင် terpenes ဟုခေါ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ ၂၀၀ ခန့်ပါရှိသည်။ သူတို့သည်ဆေးခြောက်စက်ရုံအားပုံမှန်အရသာနှင့်အနံ့ကိုပေးကြသည်။ ၎င်းတို့သည် CBD နှင့် THC စသည့် cannabinoids နှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြပြီးသူတို့နှင့်ပေါင်းသင်း။ အပြုသဘောပါ ၀ င်မှုသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် CBD (ကျွန်ုပ်၏ခွေး၊ ကြောင်၊ စသည်) ပေးနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ CBD ကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။ နာကျင်မှု၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို CBD မပေးမီဘက်စုံတိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အကြံပြုသည်။ လူများကိုစားသုံးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များသောအားဖြင့်အလွန်သေးငယ်သောဆေးပမာဏကိုသတိရပါ။ ဥပမာခွေးများသည် THC ကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်၎င်းတို့တွင်များစွာသော cannabinoid receptors ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဥပမာပြည့်စုံသော CBD လျှော်ရေနံပမာဏအနည်းငယ်မှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။
သင်၏လျှာအောက်ရှိ CBD tincture ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာထိန်းသိမ်းထားပါသလဲ။
သင်၏လျှာအောက်စက္ကန့် ၃၀ မှတစ်မိနစ်အထိ CBD tincture ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်း၏။ ပြီးတော့ပိုပြီးစုပ်ယူသည်။
သင် CBD ၏ချွတ်မြင့်မားရနိုင်မလား?
CBD အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ လူတို့မြင့်မားရန်ဆေးခြောက်များတွင်အသုံးပြုသောဒြပ်ပေါင်းကို THC ဟုခေါ်သည်။ အစား CBD သည်အချို့သောသူများအတွက်မြင့်မားသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောခံစားချက်မျိုးခံစားရစေသည့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ များသောအားဖြင့် CBD သည်အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောသူများမှာမူအလွန်ညံ့ဖျင်းသည်ဟုခံစားရသည်။
တစ် ဦး CBD မြင့်မားသောအရာကိုခံစားရသနည်း
CBD သည်သင့်အားမြင့်မားစေခြင်းကိုမဖြစ်စေပါ။ THC တွင်တွေ့ရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများမရှိပါ။ သို့သော် CBD ၏သိမ်မွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ရှိပါသည်။ ပျော့ပျောင်းသောစိတ်အေးချမ်းမှုနှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိမှုသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအတွေးများကိုသုံးစွဲသူများစွာကခံစားကြသည်။
မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောကြောင့်လျှော်မျိုးစေ့ဆီမှမြင့်တက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲဒီအစားဆီကလုပ်ထားတဲ့လျှော်မျိုးစေ့မှာပရိုတိန်းနဲ့အာဟာရတွေများတယ်။ Hemp seed oil သည်အစားအစာဖြစ်သည်။
CBD Hemp Oil နှင့် CBD ဆေးခြောက်အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Hemp နှင့်ဆေးခြောက်ပင်များသည်မတူညီသောဆေးခြောက်အပင်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Hemp သည် CBD Hemp Oil ရရှိရန်အသုံးပြုသည်။ ဆေးခြောက်အပင်များသည် CBD ဆေးခြောက်ရေနံအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ CBD Hemp Oil တွင် THC အနည်းငယ်သာရှိသည်သို့မဟုတ်လုံး ၀ မရှိသော်လည်းသို့သော် CBD ဆေးခြောက်ရေနံတွင် THC ပမာဏများစွာရှိနိုင်သည်၊ ဆေးခြောက်စက်ရုံမှပြုလုပ်သော Cannabis Oil တွင်များစွာရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမသူတို့တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ CBD ရေနံတွင်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်စုစည်းထားသော CBD ထုတ်ယူမှုပါဝင်သည်။ Hemp oil တွင် CBD လုံးဝမပါ ၀ င်သော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သောဖိညှစ်ထားသောသစ်စေ့များဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာအစားအစာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
CBD တွင်မတူညီသောသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကိုမလှုပ်ရှားသောကြောင့်သင့်ကိုမမြင့်စေပါ။ ၎င်းသည်သေးငယ်သောဆေးပမာဏနှင့်သတိပေးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်သက်သာစေနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ နာကျင်မှုနှင့်ကြွက်သားများချောင်းဆိုးခြင်းကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်ပျို့ချင်ခြင်းသို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်အကျိတ်ဆန့်ခြင်း၊
စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့အခွအေနေမဟုတ်ပါဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသောသုံးစွဲသူများသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏လက်ရှိစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်တိုးခြင်း သို့သော်သုံးစွဲသူများစွာအတွက် CBD သည်အခြားနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ စိုးရိမ်စိတ်ကိုပြင်းထန်စွာလျှော့ချပေးသည်။ ထို့ကြောင့်လူအများကယင်းကိုစိတ် ၀ င်စားကြသည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုကြသည်။ တစ် ဦး anxiolytic နှင့် anti-psychotic မူးယစ်ဆေးအဖြစ် CBD ၏အရည်အသွေးတွေကိုကောင်းစွာလေ့လာထားပါသည်။
သင် CBD အပေါ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်သလား?
CBD သည်များသောအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သေစေလောက်သောအလွန်အကျွံသောက်သုံးရန်အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း CBD အလွန်အကျွံသည်အိပ်ငိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်ချင်ခြင်းကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ CBD သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ CBD ကို metabolize လုပ်သောတူညီသောအင်ဇိုင်းများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသောဆေးများကို metabolize လုပ်သည်။ CBD ကိုအသုံးပြုသောအခါအထူးသဖြင့်ပမာဏပိုမိုများပြားစွာသို့မဟုတ်သီးခြားပုံစံဖြင့်၎င်း CYP450 အင်ဇိုင်းမ်များအားမူးယစ်ဆေးဝါးများကို metabolising မှတားဆီးနိုင်သည်။ ဒါကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားသင့်ဘူး။ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။ အသက်ကယ်ဆေးများနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောအခြေအနေများရှိပါကအထူးသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
CBD ကိုမတူညီသောအခြေအနေများတွင်သုံးနိုင်ပြီးသမားရိုးကျကုသမှုများမလုပ်သောအခါများစွာသောသူတို့သည်၎င်းထံမှအကူအညီများကိုရရှိကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါတို့ကိုကုသရာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအပေါ်သက်ရောက်မှုအသစ်တွေ့ရှိချက်များကိုတစ်ချိန်လုံးတွေ့ရှိရသည်။
CBD စားသုံးဆီများသည်သွားဖုံး၊ Gummy ဝက်ဝံနှင့်ချောကလက်ပုံစံများမကြာခဏဖြစ်တတ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏လျှာအောက် vapap သို့မဟုတ်နေရာအစားအစားစားခြင်းဖြင့် CBD ကိုထိုးနိုင်သည်။
Hemp ထုတ်ယူမှုသည်လျှော်ပင်မှထုတ်ယူသောပထမအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ CBD ရေနံနှင့်အခြား CBD ထုတ်ကုန်များကိုလျှော်ထုတ်ယူမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ CO2 နှင့်အီသနောထုတ်ယူမှုသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
CBD gummies ဆိုတာဘာလဲ။
CBD Gummies သည်စားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး CBD နှင့်ပေါင်းသည်။ အခြား CBD အစားအစာများလည်းရှိသည်။
စင်ကြယ်သော CBD ဆိုသည်မှာ CBD မော်လီကျူးများကိုအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ခွဲခြားထားသည့်ပင်မသဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဤစင်ကြယ်သော CBD ကို CBD isolate ဟုခေါ်သည်။ CBD အထီးကျန်အောင်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်; ၎င်းကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖန်တီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်လျှော်စက်ရုံရှိသဘာဝ CBD မှပြုလုပ်နိုင်သည်။ CBD အထီးကျန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဖြူရောင်အမှုန့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။
CBD အမှုန့်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော CBD isolate ကိုဆိုလိုသည်။
CBD vape ဆီဆိုတာဘာလဲ။
CBD vape oil နှင့် CBD အီးဖျော်ရည်များသည် CBD နှင့်ထိုးသွင်းသည့်အရည်အတွက်နာမည်များဖြစ်သည်။ ထို့နောက် vaping မှတဆင့်သုံးစွဲသည်။
CBD tincture ဆိုတာဘာလဲ။
တစ် ဦး CBD ဆီကိုလည်း CBD tincture အဖြစ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်။ ဤသည် tincture သို့မဟုတ်ရေနံ cannabidiol (CBD) ပါဝင်သောစုစည်းအရည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ် ဦး CBD tincture ကိုဘယ်လိုယူသလဲ
CBD tinctures ကိုလျှာအောက်မှာထားတယ်။ ၎င်းသည်ပါးစပ်၏ချွဲအမြှေးပါးကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာစုပ်ယူသည်။ များသောအားဖြင့်ရေစက်အနည်းငယ်ကျသော်လည်းလုံလောက်သောဆေးပမာဏကိုသင်တံဆိပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
CBD ဖြစ်ပေါ်လာရန်မိနစ်အနည်းငယ်မှမိနစ် ၉၀ အကြားကြာပါသည်။ အချိန်ပမာဏကိုအသုံးပြုပုံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အငွေ့ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည်အလျင်မြန်ဆုံးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသာဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောလိမ်းဆေးနှင့်သာဆေးပေါင်းများစွာသည်မကြာမီတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ စာသားအရဘာသာစကားနှစ်မျိုးစုပ်ယူခြင်းသည် CBD ကိုပါးစပ်မှသွေးစီးဆင်းမှုသို့တိုက်ရိုက်သယ်ဆောင်ပြီး ၁၅ မိနစ်မှတစ်နာရီအတွင်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နှုတ်ဖြင့်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်များသည်နည်းနည်းကြာပြီးသက်ရောက်မှုကိုမိနစ် ၉၀ ခန့်တွင်ခံစားနိုင်သည်။
CBD သည်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ် FDA မှအတည်ပြုထားသောဆေးဝါးများမဟုတ်သောကြောင့်ဆေးညွှန်းမလိုအပ်ပါ။
ဟုတ်တယ်။ တရားဝင်ဖြစ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်မည်သူမဆိုဆေးညွှန်းမပါဘဲ CBD ဆီဝယ်နိုင်သည်။
CBD သည်ယခုအခါပြည်နယ်နှင့်တိုင်းပြည်များတွင်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးဝါးနှင့်အပန်းဖြေခြင်းနည်းလမ်းများတွင်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုရန်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်ကလျှော်ထုတ်ကုန်များကိုခွင့်ပြုလျှင် CBD သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းပြည်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေများမှာကွဲပြားသောကြောင့်သင်၏နယ်မြေရှိတိကျသောဥပဒေများအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ပြည်နယ် ၅၀ တွင် CBD သည်တရားဝင်ရှိသလား။
ဤမေးခွန်း၏အဖြေရရန်“ CBD သည်တရားဝင်လား” ကိုကြည့်ပါ။
ဥရောပမှာ CBD ဆီဝယ်လို့ရမလား။
ချီလီ၊ အာဂျင်တီးနား၊ သြစတြီးယား၊ ဘေလီဇ်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ကနေဒါ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကော့စတာရီကာ၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဖင်လန်၊ နယူးဇီလန်၊ မြောက်အိုင်ယာလန်၊ နော်ဝေး၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ Puerto Rico, ရိုမေးနီးယား၊ ဆလိုဗေးနီးယား၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ တူရကီ, ဂျပန်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အရာကမဆိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့သော် CBD တွင်စွဲလမ်းစေသောအရည်အသွေးများရှိသည်ကိုပြသခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးရန်အလားအလာကောင်းများရှိသည်။
ဆေးခြောက်ပင်များသည်သဘာဝအားဖြင့် CBD ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အများအားဖြင့်စေးပန်းသောပန်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သော်လည်းအပင်နှင့်အရွက်များတွင်လည်းတွေ့ရသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာတွင် cannabinoid receptors, endocannabinoids နှင့် endocannabinoids ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြိုခွဲရာတွင်ပါ ၀ င်သောကွဲပြားခြားနားသောအင်ဇိုင်းများရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို endocannabinoid system ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့ကို anandamide နှင့် 2-AG ခေါ် endocannabinoids နှင့် CB1 နှင့် CB2 ဟုခေါ်သည့် cannabinoid receptors တို့ကဲ့သို့ပိုမိုလေ့လာခဲ့သည်။ CB1 receptors များကိုအဓိကအားဖြင့် ဦး နှောက်နှင့် CB2 receptor များတွင်တွေ့ရှိရသည်။
CB1 အဲဒီ receptor တွေကဘာတွေလဲ။
CB1 receptors များသည်အဓိကအားဖြင့် ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
CB2 receptors တွေဘယ်မှာရှိနေသလဲ။
CB2 receptors များသည်အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
endocannabinoid စနစ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာခန္ဓာကိုယ်၏မျှတမှုကိုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ homeostasis ထိန်းညှိအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်။
ဟင့်အင်း၊ မျိုးပွားနိုင်သည့်ဆေးရည်သည် THC တွင်မပါ ၀ င်သောမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါ။
မဟုတ်ပါ၊ လျှော်ပါပရိုတိန်းတွင် THC မပါ ၀ င်ပါကသင့်အားမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုကိုကျရှုံးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Hemp အမျိုးအနွယ်ကိုညှစ်ထားသောလျှော်စေ့မှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အာဟာရအလွန်ကောင်းသော်လည်း CBD တွင်သိသာစွာမပါဝင်ပါ။ ဒါကြောင့်လျှော်မျိုးစေ့ဆီဟာ CBD လျှော်ဆီနှင့်မတူပါ၊ ၎င်းသည် CBD ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လျှော်စေ့ဆီ၌ရောနှောနိုင်သည်။ CBD လျှော်ရေနံကိုမကြာခဏလည်းလျှော်မျိုးစေ့အစား MCT ရေနံသို့မဟုတ်အုန်းဆီနှင့်ရောနှောထားသည်။
လျှော်၌ CBD ရှိပါသလား
ဟုတ်တယ် ကွဲပြားခြားနားသောလျှော်ပင်များ၌ CBD ပါဝင်မှုနည်းပါးသည်။ ပန်းပွင့်ပန်းပွင့်များ၏ပန်းဆိုးပန်းများသည် CBD တွင်အများဆုံးပါဝင်သည်။
အကောင်းဆုံး CBD ရေနံကဘာလဲ။
CBD ဆီဓာတ်ခွဲခန်းကိုစမ်းသပ်ပြီးသေချာစေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်ကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ လျှော်နှင့်ဆေးခြောက်အပင်နှစ်မျိုးလုံးမှအရည်အသွေးကောင်းသည့် CBD ဆီရရှိနိုင်သည်။ အပင်များတွင်တွေ့ရသော terpenes နှင့် flavonoids များပါ ၀ င်သည့်အပင်တစ်မျိုး၏ထုတ်ကုန်သည်ပိုကောင်းသည်။
အပင်တစ်ပင်တွင်တွေ့ရသောကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများအကြားသဘာဝပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟုခေါ်သည်။ terpenes, flavonoids နှင့် cannabinoids တွေဟာသူတို့တစ်ယောက်တည်းသီးသန့်အရာဝတ္ထုတွေထက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုသည် CBD ကိုရှာဖွေသလား။
မဟုတ်ပါ၊ CBD ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုတွင်မရှာပါ။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုကိုရှာဖွေနေသော THC ကဲ့သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ အချို့သော CBD လျှော်သည့်အဆီများတွင်အနည်းငယ်သော THC ပါဝင်နိုင်ပြီး CBD ဆေးခြောက်အဆီများတွင် THC ပမာဏပင်ပါဝင်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုသည်ဤအဆီများကိုသုံးပြီးလူတစ် ဦး ၌ THC ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ CBD လျှော်ရေနံနှင့် (ပင်အများဆုံး 0,3 % THC သာဆံ့ခွင့်ပြုသည်) နှင့်အတူပင်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏအတွက်အသုံးပြုလျှင်မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်ပျက်ကွက်နိုင်ပါတယ်။ CBD အသုံးပြုသူအနေဖြင့်၎င်းကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
Cannabinoids သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ cannabinoid receptors (CB1 and CB2) နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ CBD နှင့်အခြားအလားတူ canababinoids များသည်ခန္ဓာကိုယ်၏မဟုတ်သော cannabinoid receptors များကိုလည်းပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။
CBD သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောကြောင့်ပြုမူရန်အတွက်ဆေးခြောက်ကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
endocannabinoids neurotransmitter တွေလား။
Neurotransmitters နှင့် endocannabinoids သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသော်လည်းနှစ်ခုကွဲပြားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့သူတွေရှိတယ်။ endocannabinoids သည် neurotransmitter ပမာဏကိုထိန်းညှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သဘာဝ neurotransmitter တစ်ခုဖြစ်သော glutamate သည်များသောအားဖြင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဆဲလ်များကိုသေစေနိုင်သည်။ ထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်သည်အချိုမှုန့်ပိုမိုများပြားစေရန် endocannabinoids ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ Endocannabinoids သည်နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်သဘာဝ cannabinoids ဖြစ်သည်။ THC နှင့် CBD တို့သည်ဆေးခြောက်အပင်များမှဆေးခြောက်များဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ endocannabinoids နေရာတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
CBD ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုနာကြည်းစေသော tincture သို့မဟုတ်မှုန်ရေမွှားကဲ့သို့သောလိမ်းဆေးသို့မဟုတ်ဆေးရည်အဖြစ်စားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်အဖြစ်သို့မဟုတ်အငွေ့ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့်ရှူသွင်းမိပါကအသုံးပြုသည်။ tinctures နှင့်မှုန်ရေမွှားအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးသည်အလွန်တိကျသောဆေးထိုးခြင်းအပြင်မြန်ဆန်စွာစုပ်ယူနိုင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူထံမှအရည်အသွေးရှိသောအစီရင်ခံစာများကိုမေးမြန်းရန်လည်းလွယ်ကူသည်။